ကိရိယာများထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China Tools Factory
Pen အမျိုးအစား Visual Fault Locator BML209
● 650nm တွင်အနီရောင်တောက်ပသောလေဆာ●လှုံ့ဆော်မှုနှင့် CW လည်ပတ်မှု● Standard AA အယ်ကာလိုင်းဘက်ထရီများ●ကျိုးပဲ့နေသောနေရာကိုနေရာချထားခြင်း●ကြမ်းတမ်းပြီးရေစိုခံဒီဇိုင်း● ၂.၅ မီလီမီတာ universal connector အဓိကလက္ခဏာများ BML209 BML209-1 BML209-10 BML209-20 BML209-30 Output Power * 650nm ± 20nm Dynamic Distance **> 1mW> 10mW> 20mW> 30mW လှိုင်းအလျား3~5km 8 ~ 10 km> 10 km> 10 km လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု Mode 650nm 20nm Connector 2.5mm UPP (သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် 1.25mm UP ...
၁။ JW3208 ပါဝါမီတာ ၂။ JW3105A VFL 1mW 3. Cable Stripper ၄။ Miller Stripper ၅။ သန့်ရှင်းရေးပုလင်း ၆။ Fiber Cleaver 7. သန့်ရှင်းသောအထည် 8. Fiber သန့်ရှင်းရေး
JW5004A FTTX ကိရိယာတန်ဆာပလာများ
၁။ Mini Power Meter 2. Mini VFL 1mW 3. Fiber Coat Stripper 4. Kevlar Scissor ၅။ သန့်ရှင်းရေးပုလင်း ၆။ Fiber Cleaver
JW5004 FTTx ကိရိယာတန်ဆာပလာများ
၁။ Power Meter 2. VFL 1mW 3. Cable Stripper ၄။ CFS2 Stripper ၅။ သန့်ရှင်းရေးပုလင်း ၆။ Fiber Cleaver ၇ ။
အထူးပြု Fiber Optic Termination Tool ပစ္စည်းများ (FC, SC, ST နှင့် LC connector များအတွက်)
1. Fiber optic stripper CFS-2 2. KEVLAR Scissor KC-1 3. Cabide Scibe Tool TTK-174A4။ "Tri-Hole" Fiber Optic Stripper TTK-158 5. Fiber Jacket Stripper HW-5026။ Universal Conector Crimp Tool PK-301J 7. Buffer Tube Stripper 45-162 8. Round Cable Jacket Stripper HT-325 9. 400x Universal ဖိုင်ဘာအဏုကြည့်မှန်ဘီလူး 10. 400x Microscope အတွက် 1.25mm adapter 11. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စန္ဒရားဝါယာကြိုး 12. တိကျမှန်ကန်သောကြိုး ဆိပ်ကမ်း Connector ပူမီးဖို 14. Thermometer 15. EPO-TEK 353ND Epoxy 16. Epoxy လျှောက်လွှာ S ကို ...
JW5003 Fiber Optic Termination Tool ပစ္စည်းများ
၁။ Fiber optic stripper CFS-2 2. KEVLAR Scissor KC-1 3. Cabide Scibe Tool TTK-174A 4. “ Tri-Hole” Fiber Optic Stripper TTK-158 ၅။ Fiber Jacket Stripper HW-502 6. Universal Conector Crimp Tool PK-301J 7. Buffer tube Stripper 45-162 8. Round Cable Jacket Stripper HT-325 9. 400x Universal fiber microscope 10. 400x Microscope အတွက် 1.25mm adapter 11. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စန္ဒရားဝါယာကြိုး ၁၂။ တိကျသေချာသောအမြှောက် ၁၃။ IPA Fiber Cleaning Wipes ( Pre-Moistened) 14. KimWipes 280piece / box ကို 15. NTT ဖိုင်ဘာ optic ချိတ်ဆက် ...
JW5002A Deluxe Fiber Optic Cleaning ပစ္စည်းများ
1 ဖိုင်ဘာကိရိယာ Cassette Cleaner2400X လက်ကိုင်ဖိုက်ဘာအဏုကြည့်မှန်ပြောင်း3သန့်ရှင်းရေးအစားထိုး4၁.၂၅mm Fiber Optic Cleaning Pen ၅ 2.5 2.5mm Fiber Optic Cleaning Pen6သယ်ဆောင်သောကိရိယာ Case7Connector Cleaner LED စစ်ဆေးသည့်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး 8 Fiber Connector Cleaner
1 Fiber optic kevlar cutter2Clauss Fiber Stripper3Optical Fiber Jacket Stripper4ကြိုးကြိုး Cutter5ပတ်ကြိုး Cable Cutter6Carbide ဖိုင်ဘာဘောပင်အမျိုးအစားဖြတ်စက်76Pcs အီလက်ထရောနစ် Screwdriver Set 8 7” Lineman's plier 178mm96” Needle Node Pliers 135mm 10 6” Side Cut Pliers 130mm 11 8″ ညှိနိုင်သောလိမ်ဖဲ့ခြင်း 12 Mini-Hacksaw 13 9Pcs ခေါက်အမျိုးအစား hex key set (လက်မ) 14 ဝက်အူလှည့ S / D (-)5× 100mm 15 ဝက်အူလှည့ S / D (+) # 1 × 100mm 16 ဝက်အူလှည့ S / D (-) ၆ × ၁၀၀ မီလီမီတာ ၁၇ ဝက်အူ ...
Fiber optic stripper CFS-2 KEVLAR Scissor KC-1 Optic Fiber Jacket Stripper ရောနှောထားသောဝက်အူလှည့် 18pcs ကေဘယ်လ်ကြိုးဖြတ်စက်ဝါယာကြိုးကြိုး Cutter 7” Lineman's plier (178mm) 6” Needle Node Pliers 135mm 6” Side Cut Pliers 130mm 6Pcs Electronic Screwdriver Set 8″ ညှိနိုင်သောလိမ်ဖဲ့ခြင်းအရေးပေါ်မီးခွက် Blow Brush (MS-15C) 3.5M Tape Measurement (TAJIMA) တိကျသောနိုင်းပါသောအနက်ရောင်အမှတ်အသားအသုံးအဆောင်ဓါး (၁၀၀ မီလီမီတာ) ပုလင်းတစ်လုံးခတ်ထားသည့် Carrying Tool Case (385 × 275 × 110mm) ဖြတ်တောက်ခြင်း
JW5001 Optical Cable အရေးပေါ်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ
JW5001 Optical Cable အရေးပေါ်ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဖိုင်ဘာကွန်ယက်များ၏ဖိုင်ဘာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့တွင်ယေဘူယျအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။ 1 Fiber Optic Stripper (CFS-2)2စုဆောင်းထားသည့်လက် w လိမ်ဖဲ့ခြင်း32M တိပ်ခွေတိုင်းတာချက်4အသုံးအဆောင်ဓါး ၅ စန္ဒယားဝါယာကြိုးညှပ် ၆ လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖိုက်ဘာရမ် ၇ ပါးနပ်ရှပ် ၈ နပ်ပါတ် ၈ သံပြား ၉ တံစည် ၁၀ သံခုံညှပ် ၁၁ အသေးစားဝက်အူလှည့်စက် ၁၂ အတွင်းပိုင်း - ဆx္ဌဂံလိမ်ဖဲ့ 13 ညှိယူနိုင်သည့်စပန်နာ ၁၄ တပ်ဆင်ခြင်း ဝက်အူ...
Cable ကို Stripper ပတ်ပတ်လည်
- PE, PVC, ရာဘာနှင့်အခြားအကျိတ်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ လုံခြုံ။ တိကျသောဂျာကင်အင်္ကျီကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်ဒီဇိုင်း ၂ ခု - ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်ဖိုင်ဘာအော့ဖ်လိုင်းဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများ၏တိကျသောအကျီချွတ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာ - RCS-114 သေးငယ်သောအချင်းကြိုးများအတွက် - 0.178 ၁.၁၄ လက်မမှ (၄.၅ မှ ၂၉ မီလီမီတာ) - ပိုမိုကြီးမားသောအချင်းကြိုးများအတွက် RCS-158: ၀.၇၅ မှ ၁.၅၈ လက်မ (၁၉ - ၄၀ မီလီမီတာ) - အဆုံးမှုတ်ထုတ်ခြင်းအတွက်ကေဘယ်ကြိုးအရှည်တစ်လျှောက်လောင်ဂျီတွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း - အလယ်အလတ်အရှည်ဖြတ်ပစ်ခြင်းအတွက် Spiral Cut - Spiral ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းရည်သည် ...
longitudinal Cable ကို Slitter
Fibretool Rotary Cable Stripper ကို fiber optic cable ကိုချွတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်တသမတ်တည်းသောအတိမ်အနက်အတွက်တိကျသောညှိနှိုင်းမှုရှိပြီး ၄.၅ မီလီမီတာမှ ၂၅ မီလီမီတာအထိအကျိတ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မကြာခဏနှင့်လေးလံသောအသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။